पदम राई सत्तारुढ नेकपामा प्रवेश गरेपछि विप्लबमा भूकम्प ! यस्तो छ विज्ञप्ती - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
पदम राई सत्तारुढ नेकपामा प्रवेश गरेपछि विप्लबमा भूकम्प ! यस्तो छ विज्ञप्ती
प्रकाशित मिति: १९ जेष्ठ २०७६, आईतवार
काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई ठूलो धक्का लागेको छ । पोलिट्ब्यरो सदस्य पदम राई सत्तारुढ नेकपामा प्रवेश गरेपछि ‘विप्लव’लाई धक्का लागेको हो । नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डले निलम्बित पार्टी पोलिट्ब्युरो सदस्य पदम राईलाई सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेका छन् । आइतबार नेकपाका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै पार्टीविरुद्धको गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै नेता राईलाई कारबाही गरेको बताएका छन्।
‘रुपान्तरण र उपचारको अथक प्रयास गर्दागर्दै असम्भव भएपछि र पार्टी नीति र कार्यक्रमको विरुद्ध गएपछि गत स्थायी समिति बैठकले निलम्बन गरेका पदम राई झन् झन् पार्टीको विरुद्ध अन्तरध्वंस र अपराधपूर्ण कार्यमा संलग्न भएकाले साधरण सदस्य समेत नरहने गरी निष्काशन गरिएको छ’, प्रकाण्डद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
विज्ञप्तिमा क्रान्तिको प्रक्रियामा पलायन स्वभाविक भएको भन्दै कारबाहीमा परेर, पालयन भएर सरकारको मतियार बनेका तत्वको भ्रमममा नपर्न समेत आग्रह गरिएको छ। राई आइतबार एक कार्यक्रमका बीच सत्तारुढ नेकपामा प्रवेश गरेका हुन्।
जरोकिलो किन ? – राजन लोहनी
अब राजनीति, अर्थनीति, समाजनीति, स्वास्थानीति, शिक्षानीति आदिलाई सुधार गर्ने हो भने सहृदयता दर्शनमा आधारित […]
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उम्मेदवार अग्नि सापकोटा […]